“Ny Kolontsaiko No Mari-panondroana Ahy”, Hoy Ilay Timorey Rui de Carvalho Mpanao Fitafiana Lamaody · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2017 10:04 GMT
Fanambin'ny tanora izay mirehareha maneho ny mari-panondroana Timorey eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fitaovany manokana ny fampiroboroboana ny asakanto amin'ny alalan'ny kolontsaina sy ny fomban-drazana hatramin'ny fahaleovantenan'i Timor Atsinanana. Ohatra amin'izany ny fivoaran'ny orinasan'ny fitafiana ao Timor izay ahitana “ny” lamba vita tanana tsy manam-paharoa ataon'ny vehivavy any ambanivohitra.
Manamarika hetsika manan-danja maro tamin'ny tantaran'ny Timor Atsinanana vao haingana ny pejy Angona Ruy izay ahitana ny marika Rui de Carvalho. Ohatra amin'izany ny marika Angona Rui hita eo amin'ny akanjon'ireo mpilalao olaimpika nisolotena ny firenena tamin'ny Lalao tao Rio de Janeiro taona 2016. Tsara homarihina ihany koa ny fandraisana anjaran'ny atleta Timorey Domingos Correia Cárceres tamin'ny fifaninanana body building tany Aostralia, ary farany, ny fandraisana anjaran'ireo mpanakanto Timorey madinika tao amin'ny fifaninanan-kira iraisampirenena Akademia Aziatika any Indonezia . Ireo no porofo fa marika tena malaza eo amin'ny Timorey ny Rui Collection noho izany, na amin'ny sehatry ny filatroana antoniny na tena mihaja..
Sary navoaka tao amin'ny gazetiboky Fampitam-baovao Timor. ho an'ny daholobe.
Tamin'ny 8 Desambra 2016 tao Dili, nikarakara ny fampilatroana lamaody voalohany i Rui de Carvalho ” Ny Hatsarana Timor, Ny Kolontsaiko No Mari-panondroana Ahy ” ôrizinaly, fiaraha-miasa niaraka tamin'ny Minisiteran'ny Fizahantany, Zavakanto ary Kolontsaina ao Timor-Leste sy ny vahiny manokana toy ny mpilatro Indoneziana Kimmy Jayanti sy mpilatro Filipiana Sirenne Sutton.